Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » IATA: Be pitsiny loatra amin'ny fomba hisokafan'ny sisintany indray
Ny famerana ny fivezivezena iraisam-pirenena sy eto an-toerana dia tranokala misy lalàna manahirana sy mahasadaikatra izay tsy dia mirindra.
Ny fameperana ny dia dia nividy fotoana ho an'ny governemanta hamaliana amin'ny andro voalohan'ny valan'aretina COVID-19.
Tao anatin'izay volana lasa izay, tsena lehibe maromaro izay nikatona teo aloha no nandray fepetra hanokafana ireo mpandeha vaksiny.
Anisan'ireo tsena nikatona teo aloha i Eropa dia mpitaingina aloha, arahin'i Canada, UK, Etazonia ary Singapore.
The International Fikambanan'ny fitaterana an'habakabaka (IATA) nangataka ny hampitsaharana ny famerana ny dia COVID-19 tsy dia mifanaraka loatra izay manakana ny famerenana ny fitaterana an'habakabaka. Nanentana ny governemanta hametraka fitondrana notsorina mba hitantanana ny loza mety hitranga amin'ny COVID-19 rehefa misokatra indray ny sisintany amin'ny dia iraisam-pirenena.
“Ny fameperana ny dia dia nividy fotoana ho an'ny governemanta hamaliana amin'ny andro voalohan'ny valanaretina. Efa ho roa taona taty aoriana dia tsy misy intsony izany antony izany. COVID-19 dia misy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ny fameperana ny dia dia tranokala misy lalàna sarotra sy mahasadaikatra izay tsy dia misy firindrana firy eo amin'izy ireo. Ary tsy misy porofo firy hanohanana ny famerana ny sisintany ary ny fanimbana ara-toekarena noforonin'izy ireo, "hoy izy Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.
Ny valin'ny fitsapana ireo mpandeha tonga any Angletera dia mampiseho fa tsy mampidi-doza ny mponina eo an-toerana ny mpandeha. “Amin'ireo telo tapitrisa tonga teo anelanelan'ny volana febroary sy aogositra dia 42,000 250 monja no nosedraina - na latsaky ny 35,000 isan'andro. Mandritra izany fotoana izany, XNUMX isa ny isan'isa amin'ny tranga any Angletera ary misokatra ny toekarena - ankoatry ny dia iraisam-pirenena. Tokony hanana fahalalahana hanao dia lavitra ihany ny olona, ​​”hoy i Walsh.
Tao anatin'izay volana lasa izay, tsena lehibe maromaro izay nikatona teo aloha no nandray fepetra hanokafana ireo mpandeha vaksiny. Anisan'ireo tsena nikatona teo aloha i Eropa dia mpitaingina tany am-boalohany, narahin'i Canada, UK, Etazonia ary Singapore. Na i Aostralia, izay manana ny fetra farany mahakivy indrindra, dia mandray fepetra hanokafana indray ny sisintaniny amin'ireo mpandeha vaksiny hatramin'ny Novambra.
Iată manohana ireo hetsika ireo ary mamporisika ny governemanta rehetra handinika izao paikady manaraka izao hanokafana ireo sisintany:
Ny vaksiny dia tokony hapetraka haingana ho an'ny rehetra.
Ireo mpandeha vaksiny dia tsy tokony hiatrika sakana amin'ny fivezivezena.
Ny fitsapana dia tokony hahafahan'ireo izay tsy mahazo vaksinina mandeha tsy misy karantina.
Ny fitsapana antigen no lakilen'ny fitondrana fitsapana mahomby sy mahomby.
Tokony handoa vola ny fitsapana ny governemanta, ka tsy lasa sakana ara-toekarena amin'ny dia izany.